Home Wararka Mustafa Cagjar oo xiray siyaasi ka tirsanaa xukuumadda degaanka Soomaalida
Mustafa Cagjar oo xiray siyaasi ka tirsanaa xukuumadda degaanka Soomaalida
Wararka ka imaanaya magaalada Jigjiga ee dowlad degaanka Soomaalida ayaa sheegaya in Xabiib Muxumed Yusuf oo horey uga mid ahaa xukuumadda degaanka Soomaalida lagu xiray magaalada Jigjiga.
Xabiib ayaa sida wararku sheegayaan habeenkii xalay lagu xiray magaalada Jigjiga, waxaana xarigiisa HOL u caddeeyay mid kamid ah ehelladiisa u dhow, iyadoo wali aan la ogaan sababta keentay xariggiisa.
Xabiib Muxumed Yusuf ayaa horey xilal kala duwan uga soo qabtay dowlad degaanka Soomaalida, gaar ahaan xukuumadda Mustafe cagjar, oo uu ahaa markii u damaysay Wasiirka Warfaafinta.
Waxaa xusid mudan in Xabiib uu markii u dambaysay ku jiray xubno isku magacaabay waxay ugu magac dareen, garabka sixitaanka ee Xisbiga Barwaaqo laantiisa dowlad degaanka Soomaalida, kuwaas oo u badnaa xubno horey xilal uga soo qabtay xukuumadda dowlad degaanka Soomaalida, iyadoo dowladduna ay sheegashadoodaas ku tilmaantay mid aan waxba ka jirin.
Maalmahan ayaa waxaa degaanka ka jiray isfaham la’aan u dhaxaysay xukuumadda iyo xubno horey xilal kala duwan uga soo qabtay dowladda, kuwaas oo lamagac baxay waxay ugu magac dareen, sixitaanka xisbiga Barwaaqo, kuwaas oo sheegay inay cabasho ka qabaan dowladda, isla markaana ay dhaliilsan yihiin qaab shaqeedka dowladda.
Previous articleGuddiga Doorashada Heer Federal oo hakiyey doorashada kursiga loo xiray Fahad Yaasiin
Next articleNin ka danbeeyay dilka Gabar Soomaali ah oo loo gudbiyay Maxkamadda sare ee Malaysia
Soomaaliland oo si adag uga hadashay sargaal dhawaan kasoo goostay!
Mudaahaad xoogan oo caawa ka socda xaafado kamida magaalada Muqdisho